၂၁ . ၃ . ၂၀၁၁ တနင်္လာနေ့ တွင် အရှင်ဘဒ္ဒန္တပညာသာရ ( ပန်းတစ်ပွင့်တောင် ၊ ဆရာတော် )
၂၂ . ၃ .၂၀၁၁ အင်္ဂါနေ့ တွင် အရှင်ဝိရိယ ( ဓမ္မဘေရီ ၊ တောင်စွန်း . ဆရာတော် )
၂၃ . ၃ .၂၀၁၁ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ ( ဓမ္မဒူတ ၊ ဆရာတော် )
တရားပွဲကျင်းပမည့်နေရာ ။ ။ ညောင်ပင်လေးဈေး ၊ အောက်လမ်း လမ်းမတော်မြို့နယ်
တရားပွဲကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ ညချမ်း ( ရး၃၀ ) နာရီ
အလှူ့တကာ အလှူအားလုံးထဲတွင် တရားအလှူသည်အမြတ်ဆုံး
Posted by ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား at 3/15/2011 07:25:00 AM
at 3/15/2011 07:25:00 AM